Akụkọ - Usoro Mmepụta
1.Choose ihe: Akwa borosilicate iko tube
Ka ịhọrọ nha dị iche iche, ọkpụrụkpụ na dayameta dabere na ngwaahịa ndị achọrọ ịmepụta. Ma enwere agba nke transperent, amba, acha anụnụ anụnụ, odo, isi awọ, pink, nwa, Agba a na-ejikarị eme bụ transperent.
2. dabere na ngwaahịa nha iji mee eserese iko
Kpoo iko iko ma wepu tube n'otu uzo, wee jikọọ ngwụcha nke fọdụrụ na eriri roba, Isi nke ọzọ nke eriri ahụ dị n'ọnụ gị, N'oge a, agbaze iko ahụ, wee tinye ya n'ime ebu ahụ, na-afụ ụfụ ikuku n'ime iko ahụ, hapụ ya ka ọ zaa, wee gbanwee akụkụ iko ahụ n'otu oge, hapụ ya ka ọ gbanwee na ebu
5. Aka Aka Aka
6. Mee onu
Mgbe ọtụtụ usoro kpo oku, ọkụ ọkụ nke iko n'onwe ya dị iche na ebe dị iche iche, nke ga-eduga na nrụgide na-ekwekọghị ekwekọ nke ngwaahịa n'onwe ya. N'ikpeazụ, a ga-eme ka ngwaahịa ahụ dị ọkụ otu oge.
Tinye ngwaahịa ndị a n'ime ọkụ ọkụ, enwere eriri na-ebufe na-abịa n'otu njedebe ma na-apụta na nke ọzọ. N'oge a tinye ngwaahịa ahụ site n'otu njedebe n'ime, jiri nwayọọ nwayọọ si na obere okpomọkụ dị elu. Ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu dị nso na agbaze iko ahụ, wee si na ọnọdụ dị elu gaa na okpomọkụ dị ala. Usoro dum na-ewe ihe dị ka elekere 1. Ngwaahịa nke na-apụta dị ka nke a bụ nke kachasị dịrị nchebe.